Tallaabo uu qaaday wasiirka difaaca Sweden oo ka carreysiisay Turkey
Peter Hultqvist, Wasiirka Difaaca Sweden
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Turkey ayaa u yeertay safiirka Sweden ee Ankara, si ay uga ashtakooto xiriir dhex maray laba wasiir oo Swedish ah iyo xubnaha ka tirsan kooxda Ciidamada Dimoqraadiga Syria (SDF), oo Ankara ay u aragto urur argagixiso, sida ay sheegeen ilo-wareedyo diblomaasi.
Turkey ayaa SDF u aragta inay ka tirsan tahay kooxda PKK ee Kurdish-ka ee dalkaas laga mamnuucay, taasi oo dagaal tobaneeyo sano socda ku qaadeysay Turkey. Ankara ayaa sheegta in kooxda Kurdish-ka Syria ee YPG, oo ah garabka militari ee SDF, ay ka dhalatay PKK.
Ilo-wareedyada Turkish-ka ayaa ayaa sheegay in safiirka Sweden looga wacay wasaaradda, sababo la xiriira wada-hadal video ah oo dhex maray Wasiirka Difaaca Sweden Peter Hultqvist iyo xubno sare oo ka tirsan SDF.
Ilo-wareedyada ayaa intaas ku daray in wada-hadalladan ay yimaadeen waxyar un kadib markii uu xiriir dhex-maray Wasiirka Arrimaha Dibedda Sweden Ann Linde iyo “argagixisada.”
Safiirka ayaa lagu yiri in Turkey ay “si xooggan u cambaareysay” xiriirka, islamarkaana “siyaasadaha halista ah ee Sweden aysan taageereyn kaliya kuwa beegsanaya madax-banaanida Syria iyo amniga Turkey, balse ay ka dhigan yihiin xadgudub cad oo lagu sameeyey xeerarka caalamiga, ayna sidaas darteed waxyeeleynayaan xiriirkeena,” ayey yiraahdeen ilo-wareedyada.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Sweden ayaa xaqiijisay in loo yeeray safiirka, waxayna sheegtay in dowladda aysan la kulmin ururada ku jira liiska ururada argagixisada ee Midowga Yurub.